केपी ओलीको लक्की नम्बर: ०२७ देखि ०७२ सम्म ! — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, राजनीति → केपी ओलीको लक्की नम्बर: ०२७ देखि ०७२ सम्म !
केपी ओलीको लक्की नम्बर: ०२७ देखि ०७२ सम्म !
झापाकाण्डदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म ओलीको नालीबेली
२४ असोज, काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका लागि सात र दुई ‘लक्की नम्बर’ ठहरिएको छ । ओलीले वि.सं. ०२७ सालमा राजनीति सुरु गरेका हुन् । ०७२ सालमा उनी प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
राजनीतिक परिवर्तनका लागि ०५२ सालमा हतियार उठाएका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई त्यसको १३ वर्षपछि नै पालैपालो प्रधानमन्त्री बने । तर, ०२७ सालमा राजनीतिमा प्रवेश गरेर झापा आन्दोलनमा हतियार उठाएका केपी ओलीका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर ४६ वर्षपछिमात्रै जुर्‍यो ।
राजनीतिमा धैर्यता र निरन्तरताको कुनै अवधि हुँदैन भन्ने कुरा ओलीको राजनीतिक जीवन एउटा जीवित साक्षी बनेको छ । ओली गरीब परिवारमा हुर्केका हुन् ।
युवा संघको संस्थापक अध्यक्ष हुने र झापामा ४ महिना पार्टी सचिव हुनेबाहेक पार्टीभित्र र बाहिर कहिल्यै पनि फस्ट म्यान हुन नपाएका ओलीले एक-डेढ वर्षको बीचमा जीवनका सबै सपना पूरा गरे ।
यसवीचमा ओली संसदीय दलको नेता निर्वाचित भए । त्यसलगत्तै पार्टीको अध्यक्ष निर्वाचित भए । र, अहिले आएर मुलुककै कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भए ।
संयोग नै मान्नुपर्छ, ओलीले यी तीनै निर्वाचनमा मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरुलार्इ पराजित गरे । डेढ वर्षअघि संसदीय दलको निर्वाचनमा पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई उनले पराजित गरे ।
त्यसलगत्तै पार्टीको महाधिवेशनमा अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री तथा १४ वर्षसम्म पार्टी प्रमुख बनेका माधव नेपाललाई पराजित गरे । पछिल्लोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा उनले देशका बहालवाला प्रधानमन्त्री तथा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई पराजित गरे ।
अन्तिम युद्धमा ओलीका सारथी बनेका छन् अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ।
ओली वि.सं. २००८ साल फागुन ११ गते तेह्रथुमको इवामा जन्मिएका हुन् । उनी डेढ वर्षको हुँदा आमाको निधन भएको समकालीन एमाले नेताहरु बताउँछन् । उनी ४/५ वर्षको हुँदा उनका पिता मोहनप्रसाद बालबच्चा दिएर झापाको सुरुङ्गा गाविसमा झरे ।
पछि कन्काइको बाढीले ओली परिवारको घर बगाइदिएपछि उनीहरु सुकुम्बासीमा परिणत भए । ओलीलाई केही समय बडाबा र हजुरबाहरुले पाले । किशोरावस्थामा ओली रामनाथ दाहालका घरमा काम गरेर विद्यालय जान थाले । उनको दश कक्षासम्मको औपचारिक शिक्षा झापामै भयो ।
झापा झरेका र वाल्यकालमै आमाको मातृ वात्सल्यबाट विमुख बनेका ओली रामनाथ दाहालका घरमा बसेर पढ्ने क्रममा रामनाथकै प्रेरणाले कलिलो उमेरमै कम्युनिष्ट बने । रामनाथ दाहाल ०२९ सालमा सुखानीमा शहीद भए ।गरिवीका कारण अरुको काम गरेर बस्न बस्न बाध्य बनेका ओली ०२३ सालमा मार्क्सवादी अध्ययन दलको सदस्य बनेर कम्युनिस्ट राजनीतिमा होमिएका हुन् ।
पाटन निवासी राधिका शाक्यसँग अन्तरजातीय विवाह गरेका ओलीका आफ्ना छोराछोरी छैनन् । भक्तपुरको बालकोट र झापाको दमकमा घर भएका ओलीले जीवनको उत्तरार्धमा परिवारका सदस्यका लागि पैसा र पदको दायित्व बोक्नुपर्ने स्थिति छैन ।
गरीबी अवस्थामा वाल्यकाल बिताए पनि ओलीले राजनीतिक यात्राकै क्रममा दमक र भक्तपुरको बालकोटस्थित अनन्तलिङ्गेश्वरमा घर बनाएर आफ्नो आवासलाई व्यवस्थित गरेका छन् । प्रचण्ड वा सुशीलले जस्तो डेरा भाडा तिरेर बस्नुपर्ने अवस्था उनको छैन ।
केपी ओली ०४४ पुस २ गतेबाट धादिङको स्यादुलमा बसेको तत्कालीन नेकपा (माले) को बैठकबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्यको जिम्मेवारीमा पुगे । ०४६ मा तत्कालीन नेकपा (माले) लुम्बिनी अञ्चल प्रमुख बनेका ओली ०४७ जेठ १ गते युवा संघको संस्थापक अध्यक्ष बने । ०४९ देखि एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य निर्वाचित भए ।
नेपालको इतिहासमा ओलीको गृहमन्त्रीको कार्यकाल यस्तो बन्न पुग्यो, जुन ९ महिनाको अवधिमा प्रहरीको गोलीबाट नेपालमा एकजनाको पनि मृत्यु भएन । तत्कालीन प्रहरी आइजीपी मोतीलाल बोहोराले ओलीको सन्दर्भमा भनेका थिए-हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूको त मुखैमा सरस्वती ।
त्यसैगरी ०५६ सालको आम निर्वाचनमा झापा २ र ६ बाट सांसद जितेका ओली ०६४ मा भने झापाकै सोही क्षेत्रमा माओवादीका सामान्य कार्यकर्ता विश्वदीप लिङदेनबाट पराजित भए ।
तर, ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट पुनः भारी मतका साथ जितेर आएपछि ओलीको निरन्तर बिजय यात्रा अघि बढ्यो ।
ओलीको शैक्षिक योग्यता सामान्य रहे पनि उनमा बाहिरी ज्ञान उच्च शिक्षा लिनेको भन्दा कम छैन । भाषा साहित्यमा उनको दख्खल राम्रो देखिन्छ । संसद सचिवालयको रेडर्कमा ओलीको शैक्षिक योग्यता अनररी पीएचडी लेखिएको छ ।
झापा विद्रोहमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हतियारवद्ध संघर्ष गर्ने कि शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्ने भन्ने सवालको बहसमा ओली शान्तिपूर्ण क्रान्तिको पक्षमा थिए ।
ओली त्यतिबेला १९ वर्षका थिए । फरक मत राखेरै पनि पार्टीको निर्णय शिरोधार्य गरी सशस्त्र संघर्षमा होमिएका ओली त्यसको तीन/चार वर्षपछि नै पञ्चायती शासकको पञ्जामा परे ।
आजको नेकपा एमाले झापा क्रान्तिको मूलधार हो । तर, एमालेमा झापाली क्रान्तिकारीले पार्टीको नेतृत्व सीपी मैनालीको बहिर्गमनपछि गुमाएका थिए, जुन ओलीले फर्काए ।
ओलीले प्रधानमन्त्रीमा जित्ने निश्चित भएपछि ओलीका पूर्वकार्यकर्ता समेत रहेका राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले ट्वीटबाटै झापा क्रान्तिले पहिलोपटक न्याय पाएको आशय व्यक्त गर्दै बधाइ दिए ।
वास्तवमा झापा क्रान्तिका योद्धाहरु इतिहासको कालखण्डमा तितर-बितर भए । आज सीपी मैनाली सानो पार्टी चलाएर बसेका छन् । मोहनचन्द्र जसलाई नेपालका नेल्सन मण्डेला भनिन्थ्यो, उनी गुमनाम जस्तै छन् ।
राधाकृष्ण मैनाली एमाओवादीको भान्सा चाखेर ओली अध्यक्ष बनेपछि बल्ल एमालेमै फर्किएका छन् । ओलीचाँहि अनेक हण्डर ठक्कर खाएर भए पनि निरन्तर पार्टीमा रहेका नेता हुन् ।
ओलीले पार्टी र संसदीय दल दुवै मोर्चामा जितेपछि ०७२ सालको नयाँ वर्षमा झापा क्रान्तिका जीवित योद्धाहरुको अर्थपूर्ण जमघट आफ्नै निवासमा गराएर यो वर्ष झापाली क्रान्तिको उत्कर्ष हुने संकेत गरिसकेका थिए ।
नभन्दै मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा ओली निर्वाचित भएपछि झापा क्रान्तिको राजनीतिको एउटा उत्कर्ष टुंगिएको टिप्पणी झापा क्रान्तिका योद्धाहरुले गरेका छन् । ‘यो झापा क्रान्तिको उत्कर्षको दिन हो’हाल एमाओवादीमा रहेका भीष्म धिमाल भन्छन् ।
जेलभित्र गम्भीर बिरामी परेर मृत्युको मुखमा पुगेका ओलीलाई कसरी बचाइयो भन्ने कुरा उनका राजनीतिक सहयोद्धा राधाकृष्ण मैनालीले आफ्नो संस्मरणमा लेखेका छन् ।
सशस्त्र विद्रोहको विपक्षमा ०२८ सालमै मत जाहेर गरे पनि अल्पमतमा परेका ओली २० वर्षपछि बहुदलीय जनवादको नीति पारित भएपछि त्यसका प्रवक्ता बनेर उभिए । त्यसैले अहिले पनि ओलीलाई एमालेमा बहुदलीय जनवादको ब्याख्याता भन्ने गर्छन् उनका समर्थकहरु । यद्यपि बहुदलीय जनवादका प्रवर्तक मदन भण्डारी हुन् ।
माधव नेपालसँग ओलीको सम्बन्ध सधै उतार-चढावपूर्ण रहृयो । पार्टीमा सधैं प्रतिपक्षी भूमिकामा रहे पनि नेपाललाई निर्णायक संकटका बेलामा जोगाउन ओलीले निणर्ायक भूमिका खेले ।
बुटवलमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनमा ओली पार्टी अध्यक्षका उमेद्वार थिए, तर उनी झलनाथ खनालसँग हारे । त्यसबेला ओलीले झलनाथ पक्षलाई माओवादी परस्त भएको आरोप लगाएका थिए । त्यसबेला ओली उग्र माओवादी विरोधी मानिन्थे, अहिले आफैंले प्रचण्डसँग अंकमाल गर्न पुगेका छन् ।
सूत्रहरुका अनुसार ओली कुनै विचारधारा र अडानप्रति रुचि भएका नेता नभएर व्यवहारिक राजनीतिज्ञ मानिन्छन् । एमाओवादीसँगको उनको निकटता, र महाकाली सन्धीयता अहिलेको राष्ट्रवादी छविलाई पनि यही रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
वैचारिक हिसाबले यतिबेला ओलीको दुरी मधेसी र जनजातिप्रति बढेको छ । भारतीय पक्षसँग पनि उनको दूरी बढेको छ । तर, यो स्थायी नहुने विश्लेषण गर्ने गरिएको छ ।
आठौं महाधिवेशनमा माधव नेपालसँग मिलेका ओली नवौं महाधिवेशनमा चाँहि माधव नेपाललाई हराएर अध्यक्ष बने । पार्टीको अध्यक्ष बनेपछि ओलीले एमालेलाई मजबुद बनाएका छन् । अब प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनले देशलाई कस्तो नेतृत्व दिने हुन्, त्यो चाँहि हेर्न बाँकी छ ।